Vaovao - Famokarana vokatra vaovao- RGB Dynamic Curtain LED Strip & RGB Dynamic LED Panel
Manosika karazana vokatra roa isika - Dynamic Curtain RGB LED Strip & Dynamic RGB LED Module.
Ny trano rehetra dia mitantara, ary toy izany koa ny ao anatiny. Ny takelaka maivana maivana amin'ny fananganana lightbox LED avy amin'ny HYM Lighting dia afaka manampy anao hamolavola izany tantara izany. Ny endrika maodely dia manome antoka fa mifanaraka amin'ny anatiny, na lehibe, na kely, maotina na rendrarendra. Ankafizo ny fahaizany miovaova, isan'andro isan'andro, isan-taona. Raha manapa-kevitra ny hanova ny atitany ianao dia afaka manova mora foana ny pirinty sy ny sary mihetsika miaraka aminy.
Ny tontonana Dynamic LED dia manampy anao hamorona maritrano mavitrika amin'ny lafiny roa:
Ataovy velona ny sary hoso-doko na ampio hetsika sy rivo-piainana miavaka amin'ny rindrina sy valindrihana
Mora be ny manova ny atiny fanontana na LED. Ampifanaraho amin'ny valindrihana arakaraka ny vanim-potoana ohatra ny simulation ny lanitrao: ohatra amin'ny rahona amin'ny lohataona, amin'ny lohataona amin'ny lohataona, amin'ny orana amin'ny fararano ary amin'ny lanezy amin'ny ririnina
Ny Dynamic RGB Curtain LED Strip ny tombony dia mora apetraka, mandray karatra fifehezana K-8000C izahay amin'ny fandefasana programa ny LED.
Ny Dynamic RGB LED Panel dia mandray K-8000C karatra fifehezana amin'ny fandaharana ny LED miaraka amin'ny protokol DMX512.
Manomboka anio, lamba sy taratra LED hiteny fiteny vaovao no fanovana mavitrika azy, ny fanapahana ny static sy ny fametrahana tantara noho ny LED dia tsy static intsony fa azo afindra.
Noho izany dia afaka manazava ny pirinty amin'ny sarin'ny lamba izy ary manome ny hazavana marina fa faritany vaovao ho an'ny jiro ity, hananganana fivarotana, fivarotana Windows, efitrano fampirantiana, hetsika, fampirantiana ny zava-baovao tanteraka: boaty maivana, toy ilay boaty jiro nentim-paharazana , izay vita amin'ny firafitra aliminioma sy firakofana lamba manokana, fa manaparitaka ny lamina ao ambadiky ny modely LED, dia afaka arak'izay tianao hahatratrarana ny vokatr'ilay fandaharana aminy.
Ny valiny dia sary mihetsiketsika amin'ny alàlan'ny fihetsiky ny mazava ary lasa fiakarana mazava hatrany mifantoka amin'ny fironana vaovao sy ny teknolojia vaovao, hampanan-karena azy ireo, hahatonga azy ireo ho manintona sy manintona kokoa. Mampiasa rindrambaiko-K-8000C amin'ny fandaharana amin'ny LED, hiova ny programa an'ny LED arakaraka ny sary pirinty indraindray. Noho izany, ny mekanisma dia tena tsotra: ny firafitry ny firaka aliminioma sy ny rafitra backlight dia mijanona ho toy izany ihany, fa mba hahazoana ilay vokatra vaovao, dia mila manova ny fomba fitaovan'ny jiro sy ny finday fotsiny ihany ho fanovana mavitrika sy tsotra no fototry ny ho avy fitaovana.